Waxbarashada qasabka ah ee laga bilaabo da'da 6
Bilaabidda dugsiga hoose waa dhacdo muhiim u ah carruurta iyo waalidiinta, inta badana waa la xusaa. Waalidiin badan ayaa ilmahooda siiya "Schultüte", warqad kolay ah oo ay ka buuxaan hadiyado yaryar. Xaadaritaanka/barashada dugsiga dadwaynaha waa bilaash. Xaadaritaanka dugsiga dadwaynaha waa bilaash. Inta lagu jiro afarta sano ee dugsiga hoose, carruurtu waxay bartaan akhriska, qorista iyo xisaabta, intaa waxaa dheer aqoonta aasaasiga ah ee maadooyinka badan ee kala duwan.
Waxbarashada guud ee qasabka ah waxay bilaabataa Sebtembar ka dib marka ilmuhu gaadho dhalashada 6aad. Waalidiinta ardayda diyaarka u ah dugsiga aan gaarin lix jir inta u dhaxeysa 1da Sebteembar iyo 31ka Diisembar waxay codsan karaan ogolaanshaha dugsiga waqti hore. Haddii uu shaki jiro, maamulka dugsiga ayaa go'aaminaya in ilmuhu diyaar u yahay dugsiga iyo in kale.
Carruurta dugsiga waxaa la siiyaa shaqo-guri si ay guriga ugu qaataan oo ay u tababartaan maalin kasta, taas oo ay tahay inay awoodaan inay dhammaystiraan kaligood. Uma baahna inay si fiican u sameeyaan shaqada-guriga, maadaama khaladaadku u ogolaadaan macalinku inuu aqoonsado meelaha caruurtu aanay weli hubin. Carruur badan ayaa marka hore u baahan taageerada waalidkood marka ay timaado maareynta waqtiga, goobta shaqada iyo xoogga saarista. Xataa waqtiyada danbe, waxaa muhiim ah in waalidiintu ay caawiyaan marka ay dhibaato timaado oo ay la hadlaan macalimiinta haddii loo baahdo. Ujeedadaas awgeed, saacadaha iyo maalmaha la-tashiga iyo sidoo kale fiidadka waalidiinta ayaa la dejiyay.